Ahoana ny fomba hamoronana orinasa mifamatotra $ 47B Identity Security Market. Martech Zone
Tamin'ny taon-dasa, ny salan'isa antonony dia mitentina $ 3.5M, izay 15% mihoatra ny tamin'ny taona lasa. Vokatr'izany, ny CIO dia mitady fomba hitazonana ny fiarovana ny angon-drakitra orinasa raha ahena kokoa ny fahaverezan'ny vokatra ho an'ny mpiasa. Identity Ping manolotra ny zava-misy momba ny tsenan'ny fiarovana ny maha-izy azy ary manolotra vahaolana amin'ny fomba ahafahan'ny orinasa mamela fidirana azo antoka amin'ny sary eto ambany.
Ny fandikana data dia misy fiatraikany ratsy lehibe amin'ny fahatsapan'ny mpanjifa amin'ny marika; slip iray fiarovana dia afaka manimba ny lazan'ny orinasa. Ny fiarovana ny rahona, toy ny Next Gen Identity, dia ahafahan'ny orinasa mamela fidirana azo antoka amin'ny rindranasa rehetra avy amin'ny fitaovana rehetra, na aiza na aiza. Noho ny fahombiazany, ny fiarovana Next Gen Identity dia andrasana hiakatra 7X amin'ny taona 2014. Vinavinaina hitombo hatramin'ny $ 6B izay misy azy izao, hatramin'ny $ 47B amin'ny taona 2017. Ataovy azo antoka ny data-nao ary faly ny mpanjifanao amin'ny tamba-jotra rahona itsinjaram-pahefana. fa tsy ny firewall.
Tags: raharaham-barotrarahonafiarovana rahonaorinasa mifandrayangon-drakitra tapakaSary torohay
Fikarohana lehibe momba ny fomba hanatsaran'ny mpivarotra ny atiny ara-tsosialy